DHAGEYSO:Xaalad Binu aadam oo ka Jirta Magaalada Xudur | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Xaalad Binu aadam oo ka Jirta Magaalada Xudur
DHAGEYSO:Xaalad Binu aadam oo ka Jirta Magaalada Xudur
Degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Babool ayaa waxaa ka taagan Xaalad Nololeed oo aad u daran kadib Magaaladaan oo Mudo Sideed Sano ah u go’doonsanayn Al-shabaab ayna u sii dheertahay hada Xayiraado kale oo la saaray Wadooyinkii Qarda Jeexa ahaa ee Maciishada sida dhuumaalaysiga ah loogu soo galin jiray Xudur.
Magaalada Xudur sida Keliya ee lagu gaaro ama dadka noloshooda ku tiirsan tahay waa dhanka Hawada, waxayna shacabka Xuudr ku nool ay hada qarka u saaran yihiin Macluul.
Dadkaan Wajahaya Xaalada Adag ee dhanka Nolosha ah Kaliya ma ahan shacabkii deegaanka u ahaa Magaalada Xudur ee Horay ugu Noolaa Balse waxaa ku soo dul Qaxay oo hada Barakac ahaan Magaalada Xudur ugu Nool Boqolaal Qoysas ah oo ka soo hayaamay Magaalooyinka Rabdhuure iyo Tiyeeglow oo dhibaatooyin dhanka Nolosha ah ayagana ka jirto waxayna hada ku wada Sugan yihiin Xaalad isku Mid ah oo aan waxba is dhaamin.
Gudoomiyaha Degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa Sheegay in shacabka Magaaladaan aysan ku Filayn Waxaayabaha aan badnayn ee diyaarada lagu keenayo ayna lagama maarmaan tahay in la qaado Tilaaba xaalada Xudur wax looga Qabanayo oo dhanka Amaanka ah.
Shacabka ku nool Magaalada Xudur ee Xarunta gobolka Bakool ee shabaab u go’doonsan mudada Sideeda Sano ah waxayn Wali Rajo ka Qabaan bal inay Dowlada dhexe ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed ay Qaadaan talaabo Magaaladaan Go’doonka looga Qaadayo maadaama ay Xaalada adag Wajahayaan hada oo dhanka Nololsha ah.
Previous articleDHAGEYSO:Madaxweynaha Soomaaliya oo Munaasabada Kowda Luulyo Awgeed Ubax dhigay Taalada SYL
Next articleMadaxweynaha dalka oo saxiixay xeerar dhowr ah